Norway oo qorsheynaysa Sharciga aanan rasmiga aheyn inay kala noqoto Somalida degan dalkaasi.. - iftineducation.com
Norway oo qorsheynaysa Sharciga aanan rasmiga aheyn inay kala noqoto Somalida degan dalkaasi..
iftineducation.com – Dowladda Norway ayaa qorsheynaysa in sharciga Deganaanshaha aanan rasmiga aheyn lagala noqon karo dadka Somalida ah ee haysta Sharcigaasi, dalkaasina ku nool.
Qorshaha arintaan Norway ay ka leedahay ayaa ah in Somaliya ay dib ugu celiso Qaxooti badan oo dalkaasi ku sugan, kuwaasi oo aanan haysan sharciga rasmiga ah ee deganaanshaha dalkaasi.
Wasiirka Qaxootiga iyo is-dhexgalka ee dalka Norway haweeneyda lagu magacaabo Sylvi Listhaug oo ka tirsan Xisbiga midigta fog ee FRP ayaa ku dhawaaqdey qorshahan.
Waddamo badan oo ka tirsan qaaradda Yurub ayaa joojiyey dhamaan sharciyada la siin jiriy dadka Soomaalida ah, waxaana ay Soomaaliya u wada dirsadeen Safiiradii u fadhiyey dalka Kenya kuwaas oo loo magacaabey in ay Soomaaliya safiir uga noqdaan.
Sababta ugu weyn ayaa ah sidii ay Dowladda Soomaaliya ugala hadli lahaayeen qorshaha qaxootiga lagu celinaayo, taas oo aan suurta gal ahayn haddii labada dal aysan ka dhexeyn cilaaqaad diblomaasiyadeed.
8 qalad ee raga sameyaan waqtiga galmada ayaa dumarka ku kala jara raaxada
Booliska oo soo bandhigay labo nin oo si xeeladeysan dadka u dhici jiray..